နေရပ်ပြန်မြန်မာ အလုပ်သမားများ များပြားနေမှု၊ ကုန်တင်ယာဉ်နှင့် ခရီးသည်တင်ယာဉ်များကြောင့်ြ? - Yangon Media Group
နေရပ်ပြန်မြန်မာ အလုပ်သမားများ များပြားနေမှု၊ ကုန်တင်ယာဉ်နှင့် ခရီးသည်တင်ယာဉ်များကြောင့်ြ?
မြဝတီ၊ မတ် ၄
ထိုင်းနိုင်ငံမှနေ ရပ်ပြန် မြန်မာအလုပ်သမားများ များပြားနေမှုနှင့်အတူ ထိုင်းနိုင်ငံ မှ ကုန်တင်ယာဉ်များလာရောက်မှု၊ မြန်မာနိုင်ငံမှ ခရီးသည်တင်ယာဉ် များသွားလာမှု များပြားနေမှုကြောင့် ယခုရက်ပိုင်းတွင် မြန်မာ-ထိုင်း နယ်စပ်အမှတ်(၁) ချစ်ကြည်ရေး တံတားကြီးပေါ်၌ အချိန်ပိုင်းယာဉ် ကြောပိတ်ဆို့မှုများဖြစ်ပေါ်နေ ကြာင်း သိရသည်။
”ကျွန်တော်တို့ဘက်ကိုထိုင်းက ကုန်တင်ယာဉ်တွေက တစ်ရက်ကို အစီးရေ ၄ဝဝ ကျော်ကုန်တွေလာပို့ နေသလို မြန်မာဘက်ကခရီးသည် တင်ကားတွေက ထိုင်းဘက်ကို နေ့စဉ်အစီးရေ၃ဝဝကျော် သွားနေ ကြတော့တံတားကြီးပေါ်မှာမကြာ ခဏယာဉ်ကြောပိတ်ဆို့နေတာဖြစ် တယ်”ဟု မြန်မာ-ထိုင်းနယ်စပ် အမှတ်(၁)ချစ်ကြည်ရေးတံတားရှိ အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာနမှ အရာရှိ တစ်ဦးကပြောကြားသည်။ မြန်မာဘက်မှထိုင်းဘက်သို့ သွားသောယာဉ်များမှာမဲဆောက် မြို့သို့အလည်သွားရောက်သော ယာဉ်များနှင့် ထိုင်းနိုင်ငံမှမြန်မာနိုင် ငံသို့ပြန်လည်ဝင်ရောက်လာသော မြန်မာအလုပ်သမားများကို သွား ရောက်ကြိုဆိုသည့် ခရီးသည်တင် ယာဉ်များဖြစ်သည်။
”ဒီနေ့တံတားကြီးပေါ်မှာ တစ်နာရီလောက်ကြာသွားတယ်၊ ပြန်လာတဲ့မြန်မာအလုပ်သမား တွေက များလွန်းလို့ ခရီးသည်ကြို တဲ့ကားတွေလည်း များတယ်၊ ဒါကြောင့် ထိုင်းဘက်ကလာတဲ့ ကားတွေနဲ့မြန်မာဘက်ကသွားတဲ့ ကားတွေတံတားကြီးပေါ်မှာပိတ် ကုန်တော့တာပဲ” ဟုမြန်မာဘက် မှခရီးသည်တင်ယာဉ်မောင်းတစ် ဦးကပြောသည်။ ယခုအခါမြန်မာ-ထိုင်းအမှတ် (၂) တံတားကြီးတည်ဆောက်မှုမှာ လည်းပြီးစီးနေပြီဖြစ်သည့်အတွက် ဧပြီလဆန်းတွင် ဖွင့်လှစ်ရန်ရည် ရွယ်ထားသောအဆိုပါတံတားကြီး ဖွင့်လှစ်ပြီးစီးပါက ထိုင်းဘက်မှကုန် တင်ယာဉ်နှင့်တွဲယာဉ်ကြီးများအား အသစ်ဖွင့်လှစ်မည့် အဆိုပါအမှတ် (၂)တံတားကြီးပေါ်မှဖြတ်သန်းစေ မည်ဖြစ်သည့်အတွက် အမှတ်(၁) ချစ်ကြည်ရေးတံတားကြီးပေါ်၌ ယာဉ်ကြောကျပ်တည်းမှုမှာလျော့ နည်းသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရ သည်။
တိုးတက်သော မွန်လူငယ်အဖွဲ့အစည်းများ ပူးပေါင်းပြီး မွန်လူငယ်စကားဝိုင်း ကျင်းပ
လက်ထပ်ပြီးကြောင်း သတင်းထွက်လာတဲ့ ဟန်ဂျန်းနဲ့ ဆယ်လီနာဂျိတ်
အကြိမ်(၈ဝ)မြောက် လမ်းမတော် တန်ဆောင်တိုင် ပွဲတော် စည်ကားစွာ ကျင်းပ
မန္တလေးမြို့ရှိ ရဲအရာရှိအတတ်သင်ကျောင်း အနောက်ဘက်ခြမ်းရှိ လူနေတိုက်ခန်းများကို ရဲတပ်ဖွဲ့က
ပြိုင်ဘက်အဖြစ် အစ္စကိုခြေစွမ်းပြနေသည်ကို အဲလ်ဘာ မလိုလား
ကံကောင်းလွန်း၍ အုပ်စုဗိုလ်အဖြစ် ရပ်တည်နိုင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ဟု ဟီယာရို ဝန်ခံ